Kedu ka esi eme nhịacha maka ụmụaka nwere scoliosis? Esi tufuo scoliosis?
Massage na scoliosis
Usoro ịhịa akacha aka pụrụ iche na ịlụ ọgụ megide scoliosis nwata
Scoliosis bụ ọrịa ọjọọ nke na-ebibi ọ bụghị nanị nsị na ọdịdị nke mmadụ, kamakwa ọ na-emetụta akụkụ ahụ dị iche iche n'ụzọ na-ezighị ezi. Nke a na-adịgide adịgide na-eme ka ọkpụkpụ azụ, bụ nke na-akpata ịkpụ nke anụ ahụ, na-eme ka ibu dị na obi na akụkụ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere ọrịa a n'oge ọ bụ nwata, ozugbo ahụ ọ dị mkpa ime ihe, n'ihi na n'afọ a, a ka nwere ike idozi mmebi nke ọkpọ. Otu ụzọ kachasị mma maka iwepu scoliosis bụ ịhịa aka n'ahụ, nke anyị ga-atụle n'okpuru.
Ihe ndị mere na-eme ka ọkpụkpụ azụ dị na ya bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ ịkwa iko, ọnọdụ na-ezighị ezi mgbe ha na-arụ ọrụ na tebụl, na-ejigide akpa dị arọ site n'akụkụ ụfọdụ, ndụ dị ala. Igwe ịhịa aka na scoliosis bụ isi iji mee ka ọbara na-erugharị na nkwonkwo ma wusi corset ahụ ike. N'ihi nnọkọ mgbe nile na ngosiputa mmega ahụ, mmetụta dị mma na-eme mgbe oge dị mkpirikpi.
Usoro nke ịhịa aka n'ahụ, nke anyị ga-ekwurịta banyere taa, nwere ike weere ya dị ka ihe dị mfe ma bụrụ nke zuru ụwa ọnụ, n'ihi na ọ ga-edozi ma ụmụ ma okenye.
Mmeghari nke usoro a di iche iche, ha gunyere: stroking, press, intense rubbing. Dabere na ntụziaka nke curvature, masseur ahọrọ ọnọdụ (ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-aga n'aka nri, mgbe ahụ, anyị na-atụgharị n'aka ekpe ma na ntụgharị ihu). Iji mee ka ọbara gbasaa, ị nwere ike iji ude nke na-adabere na turpentine ma ọ bụ onye ọzọ na-enwu ọkụ.
Ịmalite ịmalite ga-amalite na nro, mana ngwa ngwa. Mgbe ahụ, isi nkwụ ahụ na-amalite ịmalite ịkpụcha azụ si sacrum (ọ bụ ihe amamihe dị na ya itinye mgbalị). Ihe kachasị na-egosi mgbanwe dị mma na ọkpụkpụ bụ ụda ọdịda nke ọkpụkpụ, nke na-egosi na azụ ji nwayọọ nwayọọ abịa n'ọnọdụ nkịtị. Oge ịme ntutu oge dum ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị otu awa. Mgbe nnọkọ ahụ, ọ bara uru ileta ọdọ mmiri ma ọ bụ ụra.
Iji nweta mmetụta ọgwụgwọ nke ịhịa aka n'ahụ megide scoliosis, nnọkọ oge niile ụbọchị ọ bụla dị mkpa. Ná nkezi, usoro ọgwụgwọ bụ ọnwa 2-3.
Ọhịa aka na-eme ka a na-eme ihe megide scoliosis
Ọ bụrụ na nwatakịrị anaghị enwe nsogbu site n'azụ azụ, ma anaghị aga kọmpi egwuregwu ma na-etinye oge dị ukwuu na tebụl ma ọ bụ kọmputa, mgbe ahụ, ịhịa aka gbochie ga-enye aka. Ihe mmeghari nke mmechi a na-adabere na ị na-egweri na ntinye dị nro nke isi nke nkwụ na ọkpụkpụ. Otu izu zuru ezu maka nanị oge abụọ maka minit 15-30, mana ekele maka nke a, a ga-ebelata ihe ize ndụ nke nsogbu na spine ruo opekempe.
Ịhịa aka na scoliosis dị mfe, mana otu ụzọ kachasị mma maka iwepu nsogbu a. Cheta na ahụike nke azụ gị na-adabere na ọnọdụ nke akụkụ ndị ọzọ, ahụike zuru oke na arụmọrụ. Gbalịa na-arụ ọrụ mgbe nile maka oge ụmụaka gị na ịhịa aka n'ahụ a, ị ga-enwekwa ihe ijuanya na nsonaazụ.
Hụ usoro nke ịhịa aka n'ahụ a na vidiyo a
Eji mpempe akwụkwọ ndị nwere ike iwepụta oge
Olee otu esi emeso adenoid n'ime nwa?
Ogbugbu oke egwu ma ọ bụ hypmiamia maka nwa
Vitamin maka ụmụaka n'okpuru otu afọ
Ụmụaka ibu oke ogo, ihe kpatara ya
Kedu ihe dị mma maka mmepe ahụ nke ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Calcium bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka ahụike nwa
Red kabeeji na Spanish
Ihe na-agwọ ọrịa na kpakpando nke pyrite
Ugboro ole n'izu ka ezi ezinụlọ nwere mmekọahụ?
Agha nke Nutcrackers: Evgeni Plushenko na Ilya Averbukh ẹmepụta ihe ngosi ọhụrụ na Moscow
Hymenocallis: atụmatụ nlekọta
Nri ụtụtụ maka onye a hụrụ n'anya - nkwa nke mmekọrịta dị ogologo ma nwee obi ụtọ
Nwunye Quail na nlekọta ntutu
Ekwenye na mbọ: a mara mma na njedebe 2016
Kedu otu esi ahọrọ ísì ísì ọma n'ụzọ ziri ezi
Oranges maka ihu akpụkpọ
Draniki na anụ
Chamomile si daikon
Mmekọrịta nke ụmụ nwanyị na nne nne tozuru okè
Jam si oroma peels
Uche na ihe na-eme ka a na-ekwu okwu
Kedu ihe ga-enye nwa gị nri ma ọ bụrụ na ọ na-afụ ụfụ?